Shirka xal u helida fatahaadaha Soomaaliya oo malintiisa saddexaad galay | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Shirka xal u helida fatahaadaha Soomaaliya oo malintiisa saddexaad galay
Shirka xal u helida fatahaadaha Soomaaliya oo malintiisa saddexaad galay
Waxaa maalintii saddexaad galay shir looga hadlayo arrimaha Fatahaada iyo abaaraha kaasi oo ka socda magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya,waxaana shirka si rasmi ah uga furmay Xarunta Bank Aduunka Magaalada Nairobi ee Dalka kenya.
Ka qeyb galayaasha shirka ee Dowladda Somaaliya iyo Beesha caalamka ayaa inta uu shirka socda diirada saari doona ka doodista geedi socodka wax ka qabashada dhinacyada dib u kabashada iyo u adkeysiga Abaaraha.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Qorsheynta Dowladda Soomaaliya C/qaadir Maxamed Aadan ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la qaado tallaabooyin wax ku ool ah oo ku saabsan arrimaha soo laab laabtay sida Fataahada iyo Abaaraha Dalkeenna.
Maanta gelinka danbe ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo shirka,iyadoona laga soo saari doono go’aan mideysan ahmiyadna u leh Soomaaliya gaar ahaan wax ka qabashada arrimaha masiibooyinka ee Fatahaada iyo Abaaraha soo noq noqday.
Shirkan ayaa ku soo aadaya,xilli Wabiga Shabeelle uu fatahaad ka sameeyay magaalada Baladweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan iyo qeybo ka mid ah Gobolka Shabeellaha dhexe.
Previous articleDhallinyaradda is abaabulay oo dhaqallo uruurin u sameyay dadkii ku wax yeelobay fatahaadaha wabiga shabelle
Next articleLabo Musharax oo ka tanaasulay u tartamida kursiga Golaha Shacabka